Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania na -ewepụta ndị na -ahụ maka njem mba ofesi kapeeti uhie
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Tanzania na -ewepụta ndị na -ahụ maka njem mba ofesi kapeeti uhie
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị na-eme njem nlegharị anya na-atụgharị kapeeti uhie maka ndị nnọchi anya njem mba ofesi n'ihi ịbịarute Tanzania n'oge na-adịghị anya dị ka akụkụ nke nnukwu atụmatụ ya ịmalitegharị ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ijeri kwuru ijeri na ọrịa COVID-19.
N'ịbụ onye oke egwu nke Coronavirus na-ama jijiji, njem bụ ụlọ ọrụ na-agbagharị ego na Tanzania.
Ọ na -emepụta ezi ọrụ dị nde 1.3, na -ewepụta ijeri $ 2.6 kwa afọ, nke ya na 18 yana pasent 30 nke GDP na nnata mbupụ mba, n'otu n'otu.
Ndị otu na-ahụ maka ndị njem na Tanzania (TATO) na-arụ ọrụ ugbu a n'ehihie n'aha ndị otu 300 ya na ndị otu ya ka ha webata ọtụtụ ndị njem njem na njedebe nke Septemba 2021.
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Maazị Sirili Akko kwuru, "Anyị na-ebupute akwa nnabata maka ọtụtụ ndị ọrụ njem ụwa, dịka akụkụ nke atụmatụ ọhụrụ iji zụọ ahịa ebe anyị ga-esochi ọrịa COVID-19."
Ndị nnọchi anya, ma ọ bụ dịka ọtụtụ n'ime ha na -ahọrọ ugbu a - ndị ndụmọdụ njem ma ọ bụ ndị nrụpụta - na -erekarị ebe ndị njem ma mee ka usoro atụmatụ njem dị mfe maka ndị njem, yana inye ọrụ ndụmọdụ na nchịkọta njem niile.
Maazị Akko kwuru, "Atụmatụ anyị [bụ] iweta ngụkọta nke ndị nnọchi anya njem 300 mba ofesi maka ọnwa iri na abụọ sochirinụ, nke ya na ndị nnọchiteanya iri abụọ na ise kwa ọnwa, inyocha na ahụmịhe etu e si nye Tanzania mma mara mma nke na -enweghị atụ."
N'okpuru nkwado nke United Nations Development Programme (UNDP), TATO etinyela nnukwu ego n'ihe gbasara oge, nka, na ego iji dobe Tanzania ka ọ bụrụ ebe dị mma na okomoko n'ime atụmatụ ya dị elu iji dọta ndị njem nọ na mba ahụ site na atụmatụ azụmaahịa ezubere iche n'ọtụtụ ahịa igodo.
Nchọpụta nyocha ahịa ndị jikọtara ọnụ na-egosi na ahịa njem nlegharị anya okomoko zuru ụwa ọnụ ga-eru ijeri $ 1.2 n'ime oge 2021-2027 yana oke uto nke afọ 11.1.
Echiche niile bụ ịkwagide mgbake nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na -arịa ọrịa iji kwalite azụmaahịa ndị ọzọ, weghachite ọtụtụ puku ọrụ furu efu, na iwepụta ego maka akụ na ụba.
Atụmatụ ịkpọbata ndị ọrụ njem mba ụwa na mba ahụ bịara ihe ijuanya, ebe ndị na -eme njem nlegharị anya na -anwa ịgbasa usoro azụmaahịa ya iji dọta ọtụtụ ndị ọbịa na bulie nọmba ndị njem ịlanarị mwakpo nke ịkpụ mpi cutthroat site na ebe ndị ọzọ na oria ojoo COVID-19.
Ndị nyocha ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya na -ekwu na mbọ a, n'eziokwu, na -egosi mgbanwe akụkọ ihe mere eme na atụmatụ azụmaahịa, ebe ọ bụ na ụzọ ndị njem na -agbagọ agbagọ maka njem mba ofesi iji kwalite ebe nlegharị anya obodo nwere oke.
Onye isi oche TATO, Maazị Wilbard Chambulo, kwuru na nzukọ ya na -arụ ọrụ n'ọtụtụ atụmatụ iji weghachite ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
“Anyị echepụtala echiche ịgbanwe atụmatụ a, n'ihi na ọ na -eme ka ahịa na echiche akụ na ụba dị ukwuu mee ka ndị na -eme njem gaa hụ ntakịrị ihe nkiri ekepụtara ekepụtara nke mba ahụ karịa ka ndị otu anyị jiri foto na -agbagharị agbagharị na -eso ha na mba ofesi. ihe kpatara ọrịa COVID-19, ”Maazi Chambulo kwuru.
TATO, ya na Ministri Ahụike, weputara nnukwu ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 n'efu nke hụrụ ọtụtụ puku ndị ọrụ n'ihu na ụlọ ọrụ njem na-anata jabs tupu oge njem nlegharị anya kacha elu.
Mkpakọrịta a mepekwara nkwado akụrụngwa akụrụngwa ahụike na okirikiri njem nlegharị anya, nke gụnyere ihe ndị ọzọ, inwe ụgbọ ihe mberede n'ala, nkwekọrịta ya na ụfọdụ ụlọ ọgwụ a ga -eji maka ọrụ ndị njem ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla emee, yana ijikọ ọrụ ahụ na ọrụ nke ndị dọkịta na -efe efe - niile na mbọ iji tụte ụlọ ọrụ njem.
N'oge na-adịbeghị anya, TATO jisiri ike pụta, na mmekorita ya na gọọmentị, ebe a na-anakọta COVID-19 na Kogatende na Seronera na etiti na ugwu Serengeti n'otu n'otu.
Ọ dabara nke ọma, mbọ ndị a bụ isi amalitela ịkwụ ụgwọ ego site na inye iwu ụfọdụ okporo ụzọ na ịkwalite akwụkwọ ọhụrụ maka ndị otu TATO.
Edelweiss, onye isi ụgbọ elu ntụrụndụ Switzerland, ekwuputala na ọ ga -agbakwunye Kilimanjaro, Zanzibar, na Dar es Salaam dị ka ebe ọhụrụ atọ ya na Tanzania site na Ọktọba, na -enye ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
Edelweiss, ụlọ ọrụ nwanne nwanyị nke Switzerland International Air Lines na onye otu Lufthansa Group, na -anya isi ahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 20 n'ofe ụwa.
Site na Ọktọba 8, 2021, Edelweiss ga-efe efe site na Zurich gaa n'ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Kilimanjaro (KIA), ugboro abụọ n'izu, yana ndị njem nlegharị anya dị elu site na Europe ka ha wee nwee amara n'oge njem nlegharị anya.
Arif Ahmed ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 26, 2021 na 12:10
Ndewo sir/madam anyị nwere ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike nyere anyị aka anyị enweghị ndị ahịa kemgbe afọ abụọ gara aga enwere m ebe obibi anụ ọhịa atọ mara mma nke ukwuu na ndịda Tanzania 🇹🇿 biko 🙏🏼